Iipesenti ezi-1 ezivulekileyo zabavelisi kunye nababoneleli-eTshayina i-1% yokuVuleka kweFektri
Ukuhonjiswa kwasekhaya okuyimfama kwiLanga elikhuselweyo lePolyester yoMthunzi weLanga
Amakhethini egumbi lokuhlala.
Umqhaphu nelineni amalengalenga
Indwangu yomkhusane yomqhaphu kunye nelinen yelinen ibonakaliswe ngomphezulu wayo omdaka, ukugqwesa komoya okugqwesileyo kunye nokuxhathisa kokunxiba. Njengengubo yekhethini, lukhetho olufanelekileyo. Iyakwazi ukufunxa uthuli oluthile emoyeni. Inkangeleko yelaphu kunye nelinen ilula kwaye intle, ngombono oqinisekileyo ngobuhle bendalo kunye nokukhanya okuthambileyo.
Ngaphambili Ikhathuni Ilanga elinemibala yeHDPE Anti UV Shade Mesh Solar Screen amalaphu
Ngokuxhaphaka kwengcinga yobomi obuphilileyo, abantu baqala ukukhuthaza ubomi bendalo "bekhaya eliluhlaza", ngethemba lokungenisa isimbo sendalo kwigumbi lokuhlala, bezisa ubungqongqo obungenasiphelo kunye namandla kusapho. Namhlanje, siza kwazisa uthotho oluncinci lwamakhethini ukukuxelela ukuba uwusebenzisa njani umbala wendalo, akususe kwisixeko esineengxaki, kwaye ubuyele kubomi bendalo nobulula bamakhethini asekhaya!
Umbala oluhlaza njengowona mzimba uphambili, ikhaya ligcwele amandla kunye namandla.
I-China Mechanism Ishicilelwe njengeLanga elikwiSunscreen elangeni amalaphu eeRoller Blinds
Ilaphu elaziwa njenge-Sunscreen Blind
Ilaphu le-1.Sunscreen ngumlilo nelangatye nekudodobalisa, izakhiwo ezinkulu zoluntu kunye nezakhiwo zeofisi kufuneka zihlangabezane nemigangatho yesizwe yokukhusela umlilo. Okwangoku, ngokweemfuno zokwakha ezahlukeneyo, amalaphu omthunzi ngokubanzi asebenzisa ilangatye nekudodobalisa inqanaba B1 (isalathiso seoksijini -32, izakhiwo ngokubanzi ziyafumaneka) kunye nenqanaba le-B2.
2. Ubungakanani buhlala buhleli. Izinto zelaphu elikhuselwe lilanga zimisela ukuba azinakulungeleka, aziyi kukhubazeka, kwaye zigcina isicaba sazo.
Ipholiyesta ePhambili yePlastikhi yoPhononongo lweeComputer Umthunzi we-75cm Ububanzi beLanga leLanga kwihotele
Umsebenzi we-roller umthunzi welaphu-uvimba we-UV
Njengoko sonke sisazi, xa imitha yelanga ebetha elangeni ikhanyisa ulusu, iya kubangela umonakalo othile kulusu. Ngokophando, i-photodermatitis inokwenzeka xa imitha ye-ultraviolet ingqongqo, kunye ne-erythema, ukurhawuzelela, i-blisters, i-edema, njl. Kunye nomhlaza wolusu. Ukongeza, xa imitha yelanga ephuma kwilanga isebenza kwinkqubo yemithambo-luvo, iimpawu ezinjengentloko ebuhlungu, isiyezi, kunye nokunyuka kobushushu bomzimba, imitha yelanga ephuma elangeni isebenza kwiliso inokubangela ukudumba komzimba kwaye kunokubangela nomngxunya. Ngapha koko, ukukhanya kwelanga ixesha elide kuya kukhuthaza ukuguga okukhawulezileyo kunye nokutshintsha kombala kwefanitshala kunye nempahla.
Imigca yelanga enefreyimu yohlobo lweSollet Rolling Blind yeeNdwangu zeOfisi
Ukuphucula ukukhanya kokukhanya
Indawo yokukhanya ichaphazeleka kukuKhanya nokuqaqamba. Emva kokungena ngqo kwigumbi, ukukhanya okuluqilima kunokuvelisa iziphumo ezibonakalayo kwindawo yangaphakathi kunye nokuziphatha kwabantu kunye nemisebenzi, kunokukhuthaza abantu ukuba baphendule ngokwengqondo, kuchaphazele imeko yabantu kunye nomgangatho wobomi, ke ukuphucula ukukhanya kwangaphakathi kubaluleke kakhulu.
Iwindows Solar Amanzi oMlilo oMlilo oMoya oBonisa iLaphu yeZip Track Track Blinds Ilaphu
UkuKhanya kunye noMnyama Umbala weVinyl Ilaphu leLanga
Izinto ezenzelwe umthunzi welanga zihlala zibizwa ngokuba lilaphu elenzelwe ilanga kunye nelaphu elangeni. Ngokwesiqhelo ukukhanya kuyaphambuka kwaye kugcina isixa sokukhanya kwigumbi ngelixa umthunzi welanga ubugcina ubushushu. Uyilo oluhle lwelanga aluzisi kuphela i-air-conditioning, ifriji kunye nokonga amandla kwigumbi lokwakha, kodwa ikwazisa ukukhanya okufanelekileyo kwigumbi lokwakha, kunye nefuthe elihle lokuhombisa ngaphakathi nangaphandle.